FBC - Abbootiin-qabeenyaa Hunaan - Chaayinaa Itiyoophiyaatti damee albuuda warqee fi sibilaa irratti bobba’uuf fedhii akka qaban ibsan
FBC Roobii Adooleessa 11 2010 E.C. - Wednesday, July 18 2018 G.C.
Raayyaan Ittisa biyyaa hojii tasgabeessuu eegale – obbo Mootummaa Maqaasaa
Eebbifamtoota badhaafmtoota warqeef sagantaan qophaa’e
Kiim Joong Uun ijaarsi proojaktootaa harkifachuu isaanitiin dheekkaman
Injinar Taakkalaa Umaa Itti Aanaa Kantiibaa maagaala Finfinnee ta’anii muudaman
Hojjettootni dhaabbatichaa miseensummaa dhaaba siyaasaa keessaa bahuu ykn dhaabbaticha gadhiisuu qabu- Jeneraal Adam Mahaammad
Abbootiin-qabeenyaa Hunaan - Chaayinaa Itiyoophiyaatti damee albuuda warqee fi sibilaa irratti bobba’uuf fedhii akka qaban ibsan
Finfinnee, Sadaasa 12, 2010 (FBC) Jilli Bulchiinsa Hunaan-Chaayinaa damee albuudaa irratti bobba’uuf hoggantoota olaanoo Ministeera Albuudaa, Boba’aa fi ‘Gaazii’ Uumamaa waliin guyyaa har’aa mari’ataniiru.
Jilli Bulchiinsa Hunaan Chaayinaa Miistar Doongsoongiin hogganamu waajjira ministeerichaatti argamuun marii geggeessaniin damee albuuda warqee fi sibilaa irratti bobba’uuf fedhii akka qaban ibsaniiru.
Itiyoophiyaan karoora qabeenya albuudaa bal’inaan misoomsuuf qabdu irratti muuxannoo wal-jijjiirraan fi ‘teeknoolojiin’ deggaruuf fedhii akka qaban jilli kun ibsaniiru.
Abbootiin-qabeenyaa bulchiinsittii fi Chaayinaa hirmaannaa amma qaban irraa haala caaluun dameelee albuudaa fi kaan irratti akka bobba’an gama mootummaan carraaleen mijeeffamaa akka jiran ‘Ministirri’ Albuudaa, Boba’aa fi ‘Gaazii’ Uumamaa Obbo Mootummaa Maqaasaa eeraniiru.
‘Ministira’ Deetaan Obbo Tewooidroos Gabra’igizi’aabiheer gamasaaniin Chaayinaan guddina gama maraa Itiyoophiyaa irratti biyya ‘ashaaraa’ ishee keesse ta’uushee jila kanaa ibsaniiru.
Qajeelfamni fayyadamummaa waliinii irratti hundaa’e caalaa cimuu akka qabu Obbo Tewoodroos kaasaniiru.
Hariiroon Itiyoophiyaan bulchiinsa Hunaan waliin qabdu dhimmoota ijoo wal-tumsuun hojjachuu dandeessisan irratti akka xiyyeeffatu ‘ministira deetaan’ kun ibsaniiru.
Odeeffannoo kana kan arganne ‘Ministeera’ Albuudaa, Boba’aa fi ‘Gaazii’ Uumamaa irraati.
Oduuwwan Biroo « Dhagaan cilee Yaayyoo dargaggootaf kenname	Abbaa-taayitichaa kurmaana tokkoffaa baranaa keessatti galii Birrii bil. 3.03 walitti qabuu isaa beeksise »
Jila Shaampiyoonaa Atileetiksii Dargaggoota Addunyaati deebi’aniif simannaan taasifameef
Odeeffannoo haala gabaa
Odeeffannoo gatii omisawwan kuduraafi Muduraa guyyaa har'aa(30/03/2007
1 Qullubbii Diimaa 9:50-10:50 11:00-11:50 8:00-9:00 10:00-10:60 kg. 11:00-12:00 kg. 12:00-13:00
2 Qullubbii Adii 48:00-50:00 53:00-55:00 38:00-40:00 50:00-56:00 kg. 55:00-60:00 kg 50:00-60:00
3 Dinnicha 3:80-4:00 5:00-5:50 3:60-4:00 5:00-6:00 kg 5:00-6:00 kg 6:00-7:00
4 Timaatima 8:00-10:00 12:00-13:00 8:00-9:00 11:00-12:00 kg 12:00-14:00 kg 13:00-15:00
5 Kaarotii 5:00-6:00 7:00-8:00 6:00-8:00 10:00-11:00 kg. 10:00-12:00 kg. 8:00-10:00
6 Fosoliyaa 10:00-12:00 15:00-18:00 12:00-13:00 15:00-16:00 kg. 15:00-16:00 kg. 13:00-15:00
7 Qaariyaa(elforaa) 25:00-27:00 30:00-32:00 28:00-29:00 34:00-35:00 kg. 35:00-40:00 kg. 30:00-40:00